ယခုလ အောက်တိုဘာ (၂၇) ရက်နေ့တွေ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ကုလားများရဲ့ အစ် နေ့ ကြရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနေ့တွင် ဟိုရှေးပဝေသနီ ကတည်းက ကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရေးအတွက်တောင်သူဦးကြီးများနှင့် ဒိုးတူဘောင်ဘက် ကျွန်ပြု လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ကြသော ကျေးဇူးရှင်နွားများစွာ ဟာ လည်လှီးသတ်ဖြတ် (ကုရ်ဘာနီ) ခံ ကြရပါတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်ကတည်းက မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များဟာ အစ် နေ့တွင် သတ်ဖြတ်ရန်အတွက် နွားများကို ကြိုတင် ၀ယ်ယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထို့နေ့တွင်နွားများကို မသတ်ဖြတ်ကြရန် တာဆီးပိုင်ခွင့် မရှိသော်လည်း သူတို့သတ်ဖြတ်ရန်ဝယ်ယူသော နွားများကို မရောင်းချပေးခြင်း သူတို့သတ်ဖြတ်ပြီးလာပေးသော အမဲသားများကို လက်ခံရယူ စားသောက်ခြင်းမပြုကြ ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးရှင်နွားများ၏ ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်သော တိရစ္ဆာန် များအားသနားကြင်နာတက်သော သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ . . .
လူတို့လို တီတီတာတာ၊ မပြောတတ် ရှာကြလို့၊
ငုတ်တုတ်သာ မပြန်လှန်၊ ပြုသမျှ ခံရသည်၊ ဌာန်ကရိုဏ်း ပြတ်သား၊ နှုတ်လျှာများ တတ်အားလျှင်၊
နွားတို့က ဆိုရန်၊ ခွင့်ရှိသည် . . ..
သူတို့ဘေး သူတို့ဘိုး၊ သူတို့နွယ် တစ်ရိုး၊
တစ်မျိုးလုံး တစ်ဆွေလုံး၊ သူတို့တိုင် မဆုံး၊
တို့တစ်တွေ ပုခုံးမှာ၊ မီးဟုန်းဟုန်း ထမတတ်၊
တို့လုံ့လ တို့စွမ်းအင်၊ တို့အပန်း ခံနိုင်လို့၊
ဆန်စပါး ပြောင်းနှမ်း၊ ဗူးခရမ်း ပဲအမျိုး၊
မြေပြင်လုံး မောက်ဖြိုးအောင်၊ တိုးတက်သည့် ဘဏ္ဍာနှင့်၊
လိုရာတိုင်း ပြည့်စုံ၊ ကုံလုံကြ အသီးသီး၊
ကျောင်းကြီးဆောက် ဘုရားတည်၊ တစ်တိုင်းလုံး ကြွယ်သည်မှာ၊
ဘယ်သူက အရင်းဟု၊ စဉ်းစားဖွယ် မရှိ၊
ထင်အလင်း သိပါလျှက်၊ သတိပင် မပေါ်၊ ကျေးဇူးကို မမျှော်၊
စိတ်အချော် တိမ်းပါး၊ မိတ်မတော် စိမ်းကားလျှက်၊
တို့အသား တို့အသည်း၊ တို့အဆီ ရွှဲရွှဲကို၊
ထမင်းပွဲ အလယ်၊ အနင့်သား တည်ပြီးလျှင်၊
ရယ်ခါနှင့် ပြုံးခါ၊ အရသာ ခံစား၍၊
လင်မယား တစ်တွေ၊ မြုံ့ကြသည့် အနေမှာ၊
မြိန်နိုင်ပေ့ သူတို့ကိုယ်၊ မျိုနိုင်ပေ့ သူတို့ခံတွင်း၊
တို့လုပ်သည့် ထမင်းကို၊ တို့ဟင်းလျာ အသားနှင့်၊ စားကြသည့် ဖြစ်နဲကို၊
တို့အသည်း နာလိုက်ကဲ့ . . .
သင်ဟာ နွားများကို ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) တိရစ္ဆာန်များ ကို သနားကြင်နာတတ်သော သူဖြစ်ပါက သင်တက်နိုင်သောဘက်မှ ကူညီပေးပါ။ အနည်းဆုံး သင့်မိတ်ဆွေများ အား ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ဝေမျှပေးပါ။
Reference and Credit to
News from :News of Myanmar